Tijaabinta iska caabbinta dhicitaanka iyo dareerayaasha leh iPhone XS iyo XS Max | Wararka IPhone
Tijaabinta iska caabbinta dhicitaanka iyo dareeraha leh iPhone XS iyo XS Max
Ignacio Sala | | iPhone Xs, Alaabada Apple
Markasta oo qalab cusub uu ku dhaco suuqa, waxaa lagu sameeyaa tijaabooyin kala duwan oo iska caabin ah si loo xaqiijiyo sida ay u jilicsan tahay ama u adkeysan karto terminal-ka. Moodooyinka cusub ee iPhone-ka, XS iyo XS Max kama reeban yihiin. Toddobaadkan dhammaadkiisii, shirkadda SquareTrade waxay samaysay tijaabooyin kala duwan oo iska caabin ah si loo xaqiijiyo iska caabbinta muraayadda iyo shahaadada IP68 labadaba.
Sida ay ku sheegtay Apple khudbadda soo bandhigida moodooyinka cusub ee iPhone, labadaba iPhone XS iyo iPhone XS Max isticmaal muraayaddii ugu xoogga badneyd ee abid loo adeegsado dhismaha taleefannada casriga ah. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale bixiyaan shahaadada IP68, taas oo noo ogolaaneysa inaan ku quusinno iPhone-ka 2 mitir qiyaastii 30 daqiiqo.
Imtixaannadii ay SquareTrade qaaday, waxaan ku aragnaa sida tijaabada dareeraha ah loogu guuleystay. Si kastaba ha noqotee, dhalada ugu adkeysiga badan kama hor istaagin inay ku jabto dhul adag. IPhone XS wuxuu kaliya u baahday tijaabo dhererkeedu yahay laba mitir si muraayaddu u jabto gebi ahaanba, iyadoo muujineysa jajabyo yar yar oo muraayad ah oo ku wareegsan.
Natiijada iPhone XS Max waxay ahayd isku mid, jabinta muraayadda gadaal ka dib markii ay ka soo dhacday isla joogga. Wareegyada birta ah ee birta ah ee ay adeegsato Apple, waxay ilaaliyeen labada aaladood ee tijaabada dhinaceeda, si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca wejiga hore, muraayadda ka soo horjeedda dhulka, ayaa sababay burburka labada terminaal.
Isla tijaabadan, halka shaashadda iPhone XS muujisay cillad, tii iPhone XS Max, waxay wali noo ogolaatay inaan isticmaalno terminaalka dhibaato la'aan, haddii aanaan xisaabtamin qaybaha quraaradaha ee ka go'ay dayrta kadib.
SquareTrade waxay sidoo kale dooneysay inay tijaabiso iska caabinta biyaha ee iPhone XS iyo iPhone XS Max, iyaga oo ku qooyay 30 daqiiqo haan ay ka buuxaan 138 gasacadood oo biir ah. Tijaabada waxaa lagu qaaday biir, maadaama ay ahayd dareeraha ay Apple ku xustay nuxurka ugu dambeeyay. Labadaba iPhone XS iyo iPhone XS Max labaduba waxay ka badbaadeen qubeyska biirka dheer waxayna ahaayeen kuwo si buuxda u shaqeynaya, iyagoo xaqiijinaya sheegashada Apple ee shahaadada IP68.
Shirkadani waxay u qoondeysay iPhone kasta dhibic la yiraahdo Dhibcaha jabid (erey aan jirin laakiin aad wada fahamsan tihiin), iyadoo la tixgelinayo waxqabadka mid kasta oo ka mid ah tijaabooyinka sida ku cad sawirka kore. Halka iPhone XS uu dhaliyay 86, oo loo aqoonsaday inuu yahay Khatar Sare, iPhone XS Max wuxuu dhaliyay 70, oo lagu tilmaamay inay tahay Khatar Dhexdhexaad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone Xs » Tijaabinta iska caabbinta dhicitaanka iyo dareeraha leh iPhone XS iyo XS Max
DisplayMate wuxuu kujiraa shaashadda iPhone XS Max sida ugufiican suuqa
Hawsha lagu ogaanayo inay ku dhacday taxanaha 'Apple Watch Series 4' waa mid naafo ah haddii aadan 65 sano gaarin mooyee